विबाहित पुरुषसँग होटलको कोठाभित्र मस्ती गर्दा गर्दै समातिइन् लोकप्रिय मोडल अञ्जली अधिकारी ! हेर्नुुहोस् (भिडियो सहित)….. – SUDUR MEDIA
April 1, 2021 AdminLeaveaComment on विबाहित पुरुषसँग होटलको कोठाभित्र मस्ती गर्दा गर्दै समातिइन् लोकप्रिय मोडल अञ्जली अधिकारी ! हेर्नुुहोस् (भिडियो सहित)…..
काठमाडौँ । गायक दिनेश थापा , गायिका भावना आचार्य र गायिका कामना ओलीको स्वर रहेको हत्ते नहाल बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
पुरुसोत्तम सुवेदीको एरेन्ज, दीपक शर्माको शब्द संगीतमा तयार भएको गीतमा अञ्जली अधिकारी र गायक दिनेशको अभिनय रहेको छ । दिनेशको प्रेममा परेकी अञ्जलीले ढिलै भए पनि मायामा धोका भ एको पत्तो पाउँछिन् । आँफुले मन पराएको ब्यक्ति विबाहित भएको रहस्य थाहा पाएपछि अञ्जली भक्कानिन्छिन् ।
विबाहित पुरुषले घरमा पत्नि रारखेरु बाहिर माया बाँड्दै हिँडेको अञ्जलीलाई मन पर्दैन । उनको मन, दृदय रुँदा उनी भावविह्वल हुन्छिन् र धोकेबाज मायालाई उसको मायाको चिनो फिर्ता गरेर आफ्नो बाटो लागेको कुरालाई निर्देशन देबेन्द्र पाण्डले कलात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् ।
अञ्जलीको रुपमा भुुुलेर घरबार बिर्सेको बताउने दिनेशलाई आँफुले यसअघि साथ दिन नसक्ने भन्दै अञ्जली बाटो लागेको गीतको भिडियोको छायांकन अनिल के मानन्धरले गरेका हुन् । जसको कलर र सम्पादन दिनसन शाहले गरेका छन् ।
गायक दिनेशका यसअघि बोली नफेर, पाउजु बरिलै, पानी मिठो कल कल लगायतका गीतले चर्चा कमाएका थिए । उनले सबै गरेर १ सय बढी म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेको ओएस नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा बताए ।
त्यस्तै गायिका भावनाका बग्ने खोला, मुलको पानी, बोल्दैन फोटो, लगायतका गीतहरुले चर्चा कमाएका छन् । त्यस्तै कामनाका राजा, मार्सी धान लगायतका सृजनाले चर्चा पाएका छन् । भिडियो: